Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiye Ku-Xigeenka HWF oo booqasho hawleed ku jooga Melbourne
Gudoomiye Ku-Xigeenka HWF oo booqasho hawleed ku jooga Melbourne
Waxaa shalay oo taariikhdu 27/4/14 ka dhacay hool wayn oo ku yaala magaaladaMelbourneshir balaadhan oo soo qaban qaabiyeen jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Victoria/Melbourne shirkaas oo uu ka qayb galay G/xigeenka Hogaanka Warfaafinta JWXO halgame Maxamed Cali oo maalmahanba socdaal shaqo ku marayay qaaradaAustralia.
Waxaa shirka la furay abaarihii 3dii galabnimo oo uu si rasmi u furay gudoomiya jaaliyadaVictoriahalgame Xikim Sheekh Cabdulaahi oo aad iyo aad u soo dhaweeyay G/ku-xigeenka HWF, sidoo kalana u mahadnaqay jaliyada S.Ogaadeeniya eeMelbournesida ay had iyo goor heeganka aan hagartu ku jirin ugu yihiin sidii heeryada gumaysiga looga dulqaadi lahaa dalkooda hooyo ee Ogaadeeniya.
Intaa ka dib sidii caadada u ahayd shirarka jaaliyadaha S.Ogadenya waxaa aayado quraana iyo wacdi diiniya ka soo jeediyay Maxamed Rashiid oo dadkii kula dardaarmay Alla ka cabsiga iyo inay dulmiga gumaysiga la diriraan ay waajib tahay oo diintooda iyo dalkoodaba difaacdaan. Waxaa kaloo war bixin kooban madasha shirka ka soo jeediyay taasoo ku saabsanayd wax qabadkii jaaliyada gudoomiye Xikim Sh Cabdulaahi oo cadeeyay inay jaaliyadani safka hore kaga jirto jaaliyadaha Ogaadeeniya ee caalamka iskuna duuban tahay si fiicana u fashilisa tabaha gumaysigu mar walba oo shirqool ay soo safriyaan. Intaa ka dib waxaa isna madasha ka hadlay G/xigeenka jaaliyada mudane Xasan Axmed Nuur oo isagu u qaabilsan jaaliyadda dhinaca arimaha dibada, wuxuuna shirka u sheegay sida dhaw ay xidhiidh ula leeyihiin wadanka ay ku nool yihiin ee Australia. Waxaa isagana madasha ka hadlay Maxamed Faray oo erayo waano iyo duco iyo dardaaran ah bulshada qaybaheeda kala gadisan u jeediyay
Intaa ka dib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay G/ku xigeenka Hogaanka Warfaafinta mudane Maxamed Cali oo aad ugu mahadnaqay jaaliyadda soo dhawayntii diiranayd ee lagu soo dhaweeyay Melboune, waxaa kaloo uu madasha ka cadeeyay inay jaaliyadaha Australia heegan u yihiin xoraynta dalkooda hooyo ee Ogadenya. Wuxuu G/xku-xigeenku ka waramay guud ahaan dhulka xaaladda uu ku sugan yahay dalka Ogaadeeniya, tacatiyada ka jira iyo xaalada guud uu halganku marayo isagoo sheegay inuu gumaysigii markuu holin waayay dhabaaxooyinka CWXO uu ku soo urusaday inuu maatida dhibaateeyo ama dadka biri magaydada ah iyo go’doominta shacabka iyo dacaayada raqiisa oo horumar baa la gaadhay ah iyo dacaayado TV uu u samaystay oo beenta caqliga saliimka aan gali karin uu ku soo bandhigo. Intaa ka wuxuu kula dardaamay inay dadaalkooda sii labanlaabaan.
Shirkiina wuxuu ku soo dhamaaday guul iyo jawi farxad leh, iyadoo G/ku-xigeenka iyo hawl-wadeenka jaaliyadda ay wada yeelan doonaan fadhiyo lagu qorsheeyo hawla la xidhiidha halganka gaar ahaan arimaha Warfaafinta.